Ogaden News Agency (ONA) – Tirada Taagereyaasha Ka baxaya Xisbiga EPRDF oo aad u sii kordhaya.
Tirada Taagereyaasha Ka baxaya Xisbiga EPRDF oo aad u sii kordhaya.
Wararka naga soo gaadhaya Itoobiya ayaa sheegaya in tirada taageereyaasha iskood uga baxay Xisbiga EPRDF oo maalinba maalinta kadambaysa hoos usu dhacaya. Warkan ayaa intaas kudaraya in sumcadii iyo taageeradii shacabku uhayay EPRDF ay yaraatan tan iyo intii shirwaynihii xisbiga ee dhawaan lagu qabtay magaalada Maqale ee Kililka Tigrey uu qabsoomay.
Daraasad dheer oo xisbigu arintan ayaa lagu soo xaqiijiyay ineey tiradii taageerayaashu hoos udhacday taasoo kaliftay in EPRDF ay go’aansatay inaan laga aqbalin codsiyada faraha badan ee xubno horaan xisbiga uga mid ahaan jiray ay ku dalbanayaan ineey xisbiga iskaga baxaan. Masuuliinta EPRDF ayaa amar kubixiyay inaan qofna laga aqbali karin inuu xisbiga iskaga rukhsaysto.
Dhanka kale EPRDF ayaa ku eedaysay xubnihii iskood uga baxay ineey doonayaan ineey kooxaha mucaaradka ah kku biiraan arintaasoo aan wax cadayn ah aysan EPRDF uhaynin. Dadka indha indheeya siyaasada Itoobiya ayaa ku tilmaamay xogtan ineey cadayn utahay fashilka iyo siyaasad xumida lasoo daristay EPRDF.
Waxaa kaloo warkan uu intaas raacinayaa in 10 macalin oo wax kadhigta dugsiga sare ee xaafada Amanuel oo kamid ah xaafadaha magaalada Addiss Ababa ay codsadeen ineey kala noqdaan taageeradii ay uhayeen xisbiga OPDO oo kamid ah isbahaysiga EPRDF. Taageerayaasha xisbiga ayaa badankood ugu biiray EPRDF ineey shaqo kuhelaan ama tacliin taasoo ay aysan waxba uga suuragalin ooy ku fashilantay EPRDF.
Wararku waxay intaas ku dareen in u xibiga EPRDF ku guul daraystay hanashada shacbiga Itobiya oo si wayn uga soo hor jeedsaday siyaasada guracan ee gumausiga ku dhisan & soo saaris kaadir hogaamin kara bulshada taas oo keentay in maanta u EPRDF lagu kala yaaco.